Kedu ka Red Network Tiger Jackpot Network si arụ ọrụ? - jluis37.com
Kedu ka Red Network Tiger Jackpot Network si arụ ọrụ?
Posted by Lloyd Wilson On June 30, 2021 In My Blog
Ndị na-arụ ọrụ cha cha na ndị na-emepụta oghere na-achọkarị ụzọ ọhụụ iji kpalie ndị egwuregwu ha ma debe ha n’akụkụ oche ha. Otu mmepe mmepe amara amara n’azụ akara Red Tiger adịghị iche. Laa azụ na 2016, otu onye a ma ama na Britain na-ede akwụkwọ kpọtụrụ ụmụ nwoke a wee gwa ya ka ha mepụta ihe ọhụụ na ihe na-atọ ụtọ maka ndị egwuregwu ha. Yabụ, Red Tiger were oge ya. Na 2019, ha webatara Must Fall Jackpot Network, nke a makwaara dị ka Daily Drop Jackpots.
Kedu ihe nke ahụ pụtara maka ndị egwuregwu Stake? Oghere Red Tiger niile, nke dị na cha cha na akụkụ nke netwọk ahụ, na-enye ndị egwuregwu ohere iji merie jackpots na-aga n’ihu ọtụtụ ugboro n’ụbọchị! N’ihe dị ka June 2021, Stake.com na-akwado oghere 166 Red Tiger ebe ị nwere ike merie jackpots dị iche iche na-aga n’ihu. Lelee ndepụta ahụ dum ebe a.
Olee Jackpots Na-aga n’ihu E Nwere?
E nwere ụdị atọ nke Red Tiger Must Fall Jackpots:
Oge Udo – Nke a bụ ọkwa dị ala nke na-akpali oge ọ bụla kwa ụbọchị. Dgwọ ọrụ ahụ na-abụkarị na mpaghara ọnụọgụ atọ na anọ Super Drop – Nke a bụ obere jackpot buru ibu nke na-akpata ọtụtụ ugboro n’ụbọchị.
Dbọchị Kwa – Nke a bụ ihe kacha baa uru nke ụyọkọ. Nke a jackpot ga-akwụ ụgwọ kwa ụbọchị tupu 12 PM CET.
Ego ole ka enwere ike imeri site na Network Red Red Tiger?
Kemgbe iwebata ha na Febụwarị 2019, akwụgoro € 25 nde nye ndị egwuregwu mmeri. Dịka ọmụmaatụ, otu onye na-agba chaa chaa nwere ihu ọma jisiri ike merie .000 78.000 dị ka ihe nrite kwa ụbọchị na oghere Dragon’s Luck Power Reels. N’ọnọdụ ọzọ, onye ọkpụkpọ kpọbatara € 10.000 Hourly Jackpot Drop si Dynamite Riches.
Olee Otú M Ga-esi Emeri Jackpot?
Ọ dị nnọọ mfe. Ọ bụrụ na ịmebeghị ya, debanye aha na Stake.com, ma kpọọ oghere Red Tiger ọ bụla dị na cha cha cha cha cha. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịlele egwuregwu ndị ụlọ ọrụ na-emepụta Red Tiger rụpụtara, lee anya pọtụfoliyo egwuregwu ha.
Onyinye a na-agbata n’ọsọ bụ otu maka oghere niile bụ akụkụ nke netwọkụ. Mgbe ị na-agba ọkụ egwuregwu kachasị amasị gị, ị ga-ahụ nha jackpot ọ bụla na mgbe ha na-ahazi ịmalite n’akụkụ aka ekpe nke ihuenyo gị.
Ga – amata na ị meriela mgbe ọghọm aghara aghara na – egosiputa akara atọ jackpot. Nke ahụ ga – eme ka igwe ojii Red Tiger rụọ ọrụ nke ga – amalite ịgbagharị iji chọpụta ụgwọ ọrụ ị ritere. Ozugbo wiil ahụ kwụsịrị, ọ ga-egosi gị otu ị gbuchara ma kwụọ ego gị ozugbo.
Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Jackpots Red Tiger
Netwọk jackpot na-arụ ọrụ n’otu aka ahụ na oghere ndị ọzọ na-aga n’ihu. Onu ogugu ndi mmadu choro na mbu abanye n’ime ọdọ mmiri jackpot pụrụ iche, na-abawanye ka ọtụtụ ndị egwuregwu na-agba mgba na oghere ndị a. Red Tiger na-ewepụta 3% nke ego niile a na – akwụ maka Network Drop.
N’ụzọ dị mwute, onye nrụpụta egwuregwu a nwere mmachi na ụfọdụ mba yana ikike. N’ihi ya, egwuregwu ha adịghị n’ụwa niile. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ oghere ọ bụla na katalọgụ egwuregwu ebe a, Red Tiger ma ọ bụ Stake.com anaghị akwado obodo gị.
Kedu ka ewu ewu bụ oghere Red Tiger?
Know maara ihe ha na-ekwu? Ntọala anaghị agha ụgha! Nnyocha na-egosi na kemgbe mmalite nke jackpots ha na-aga n’ihu, Red Tiger enweela ihe ịga nke ọma n’ịbawanye ahịa ahịa ịgba chaa chaa n’ịntanetị n’ọtụtụ mba. The ụlọ ọrụ na-now-atụle a Top 5 na, na ụfọdụ ebe, a Top 3 oghere egwuregwu Mmepụta.
Kedu ụzọ dị mma iji kpọọ egwuregwu oghere ma ọ bụrụ na ọ maghị na ha ga-akwụ ụgwọ oge ọ bụla na ụbọchị ọ bụla n’izu? Mara kpomkwem mgbe a ga – akpali ha na ihe ị ga – eme iji merie. O doro anya na Red Tiger mepụtara netwọkụ jackpot na-enye afọ ojuju, ndị egwuregwu Stake.com nwere ohere ịbụ akụkụ ya.
Jiri nlezianya mee nhọrọ gị, echefula ịkọrọ anyị oke mmeri gị.